कोरोना परीक्षण नमुना लैजाँदै गरेका डब्लुएचओका गाडी चालक लाई गो’ली ठो’के’र मा’रियो ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना परीक्षण नमुना लैजाँदै गरेका डब्लुएचओका गाडी चालक लाई गो’ली ठो’के’र मा’रियो !
कोरोना परीक्षण नमुना लैजाँदै गरेका डब्लुएचओका गाडी चालक लाई गो’ली ठो’के’र मा’रियो !
– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षणका लागि स्वाब सं’कलन गरेर प्रयोगशालातर्फ गइरहेका एक व्यक्तिको म्यानमारमा गो’ली ठो’केर ह’त्या गरिएको छ। म्यानमारको पश्चिमी प्रान्त रखाइनबाट स्वाब बोकेर याङ्गुनतर्फ गइरहेका सवारी चालकको गो’ली हा’नी ह’त्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
गो’ली लागेर प्याए सोन विन माउङको ज्या’न गएको बताइएको हो । २८ वर्षीय माउङ गाडी चालक हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाडीमा स्वाब परीक्षणका लागि यान्गुन लैजाँदै गर्दा गो’ली प्रहा’र भएको हो। ह’त्या गरिएका ती युवक विगत तीन वर्षदेखि (डब्लुएचओ) का लागि काम गर्दै आएका थिए।
तालिकमा हेर्नुहोस् आज यूएई र कतारसहित केही देशका मुद्राको भाउ बढ्यो
बाहिर खेल्न गएकी यी बालिकालाइ ३ युवकले उठाएर लगे, फर्किंदा बोलि बन्द, २८ दिन पछि बोलि खुल्दा यसो भनिन् (भिडियो